KDE si tartiib tartiib ah ayuu u bilaabmaa? Ku eedee PulseAudio. [Xalka] | Laga soo bilaabo Linux
Tan iyo markii aan isticmaalay Debian Waxaan dhib yar ku jiidayay bilowga KDE in, in kasta oo aysan dhib badan lahayn (u qalantaa shaqada), waxay ahayd xoogaa xanaaq badan.
Waxaa soo baxday in, ka dib markii aad gasho, ka KDE laakiin, markay bilaabaan inay ku dhajiyaan astaamaha saxaaradda, waxaa la joojiyay isla markii la soo xiray shabakadda iyo batteriga ... Tan waxaa loo sameeyay muddo u dhexeysa 5 illaa 10 ilbidhiqsi.
Dhibaatadu waxay tahay, illaa dhammaan astaamaha la raro, KDE run ahaantii ma bilaabin inay shaqeyso. Taasi waa, haddii mudadaas aad isku dayday inaad marin ka hesho Liiska, ma aysan ka jawaabin.
Maalmo ka hor ayaan dib u rakibay Archlinux y KDE waxay ku bilaabatay si layaableh oo dhakhso leh. Waan rakibay Vokoscreen si aan u sameeyo shaashadaha shaashadda qaarkood, laakiin dalabku ma uusan helin makarafoonkayga, sidaa darteed hubinta waxaan ogaaday in aysan ku rakibnayn PulseAudio.
Waan rakibay, dib u kiciyay iyo BOOM !! Mar labaad isla dhibaatada isla markaana ah rakibaadda desktop-ka oo gaabis ah.
Marka waxaan ogaaday in halkaas ay rasaastu ka socoto. Waxaan bilaabay raadinta golayaasha Arch waxaana la imid xalka, dhab ahaan labo kamid ah.
1 Xulashada 1aad: Disable PulseAudio.
2 Xulashada 2aad: Kii aniga ii shaqeynayay.
Xulashada 1aad: Disable PulseAudio.
Waxaan ku helnaa feylka /etc/pulse/default.pa oo leh xuquuq maamuleed:
Waxaan raadineynaa khadadka oranaya:
### Si otomaatig ah uxir xirmooyinka darawallada iyadoo kuxiran qalabka laga heli karo .ifexists module-udev-detect.so load-module module-udev-detect .else ### Isticmaal moduleka ogaanshaha qalabka ma guurtada ah (nidaamyada ka maqan taageerada udev) load- module module-ogaada .endif
Oo waxaan ka faalloonaynaa inay sidan yihiin:
### Si otomaatig ah uxir xirmooyinka darawalka iyadoo kuxiran qalabka lagahelayo # .ifexists module-udev-detect.so # load-module module-udev-detect # .else ### Isticmaal moduleka ogaanshaha qalabka caadiga ah (nidaamyada aan haysan taageerada udev ) module-load-module-lagu ogaado # .endif
Tani waxay xallisay dhibaatadii, laakiin markii aan bilaabay fadhiga, aaladda qabashada ma aysan soo rarin, taasi waa, makarafoonka. Marka waxaan helay xalka labaad.
Xulashada 2aad: Kii aniga ii shaqeynayay.
Isla faylka (adigoon faallo ka bixin khadadka xalka koowaad), waxaan raadineynaa sadarka oranaya:
### Cork music / video durdurrada marka durdurka taleefanka uu yahay mid firfircoon culeys-module module-door-cork ah
waana ka faallooneynaa, iyadoo sidan ah:
### Cork music / video durdurrada marka durdurka taleefanka uu firfircoon yahay # culeyska-moduleka module-door-cork
Kadib (inkasta oo aanan hubin inay lagama maarmaan tahay), waxaan ordi:
Waana intaas ..
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » KDE si tartiib tartiib ah ayuu u bilaabmaa? Ku eedee PulseAudio. [Xalka]
Xagga hore dijo
1. Aniga iima muuqato in «waana ka faalloodaynaa, iyadoo sidan ah:» waa amar konsollo ah
2. maxaa sababa xulashada labaad?
Markii aan wax ka faalloonayo khadka ('' 'hore') waa sidii oo aan lagu xisaabtamin feylka qaabeynta, ma lihi aqoon aan ugu fasiro farsamo laakiin waa tan aan fahmay.
Mahadsanid, laakiin waxaan ula jeeday in shaqada pulseaudio lagu naafoonayo isbedelkaas
Garaaca wadnaha ayaa sababa dhibaato aad u badan. Waxaan la joogay kaliya ALSA oo si aad u wanaagsan u shaqeysa waana habka kaliya ee Ardor uusan wax dhibaato ah u keenin. In kasta oo hagitaannada oo dhan, si fiican uguma shaqeynayso garaaca wadnaha maaddaama ay dhimasho u tahay jack
Waxaan nahay xitaa. Pulse Audio waa cadaab jahawareer arintaas ku saabsan. Wax fiican ayaan isticmaalayaa ALSA.
waad ku mahadsan tahay xogta elav. Waxaan ku tijaabin doonaa Debian. Waa run dhibaatadaas oo ah caajis bilowgii ... ugu yaraan Arch waxaan ku hayaa ALSA dhibna maleh.
Waxyaabaha aniga igu dhibaya ee ku saabsan desktop-ka 'KDE' waa bilowga tartiib-tartiib ah, waxay qaadataa 1 daqiiqo in lagu shaqeeyo 100%, mana daaqadaha si aad u gaabis ah u shaqeeyaan.
Caddayn: jooji dhammaan waxyaabaha aan loo baahnayn laakiin weli wali waa qool bilaabaya KDE
Kuwaas yar ee yar yar ee mashaariicda qaar la siiyo kuwa kale.
Waxaan rajeyneynaa iyo mustaqbalka wax waliba inay iswaafajin doonaan, laakiin maalmahaas, haddii KDE la isticmaalo, ALSA + Phonon VLC ayaa ugu fiican (Xitaa haddii barbaraha uu lumo amarok iyo ciyaartoy kale.)
Xaqiiqdii VLC waa tan ugu fiican arintaas.
Talo aad u fiican. Waxaa intaa dheer, waxaan durba isticmaalayaa ALSA halkii aan ka isticmaali lahaa Pulse Audio dhibaatooyinka aad sheegtay awgood.
Alsa waa ikhtiyaarka ugufiican, inaad adeegsato moobilada dhagaha ama USB-ga mooyee ... waana intaas.
Wax fiican ayaan u adeegsadaa samaacadaha dhagaha leh. BA dum tss!
Hagaag, sida layaabka leh ee aan u adeegsado maqalka garaaca wadnaha laakiin waxay i siisay dhibaatooyin alsa, ma ii ogolaatay inaan ciyaaro cajalado badan isla waqtigaas mana garanayo waxa kale, waxay i siisay khaladaad ku saabsan fiidiyowyada youtube-ka, waxaan u tagay garaaca wadnaha Waan xaliyay mana dareemin wax daahis ah rarka, si fiican haddii aan isticmaalo xfce halkii kde.
Habka ugu fudud ee loo tagi karo dhibaatadaas waxqabadka waa iyada oo lagu daro sheyga veromix plasmoid (ama systray)
Veromix? Aan aragno haddii aan haysto waqti aan ku rakibo.
Veromix? Taasi miyaa la cunay?
«Veromix waa qase loogu talagalay serverka codka ee Pulseaudio. »
Kuwa isticmaalaya Debian, dhibaato isku mid ah ayaan qabay, laakiin waxaan ku xaliyay tan:
nano / etc / default / pulseaudio // U beddel "0" una dhig "1"
Haa, laakiin waxba kama qabanayo joojinta PulseAudio, maxaa yeelay waxaan luminayaa suurtagalnimada adeegsiga makarafoonka 🙁
Waxa waligey igu qaadata inaan furo waa GIMP!
Tilmaam guud, kaliya dhig ikhtiyaarka kuu shaqeeyay si aad uga fogaato buuqa boostada.
Mahadsanid lammaane, laakiin waa inaan wax yar ka sharaxo wax walba, maxaa yeelay dad badan oo isku wax raadiya ayaa laga yaabaa inay helaan xalka koowaad mana u adeegi doono iyaga 😀
Hello Elav .. Xalkaagu runtii wuu ansax yahay :). Markii aan isticmaalay KDE marwalba waxaan dhib ku qabay in aan gacanta ku sameeyo rakibaadda si sax ah dhibaatadan darteed, marka hore waxaan rakibay nidaamka ugu yar halkaasna waxaan ku rakibay xirmada alsa-utils, xorg iyo bay'ada. Waa inaan dhahaa waan helay xoogaa daallan oo Debian ah una beddelo Arch sidaad adigu u samaysay oo kale, laakiin ugu dambayntii wax xiiso leh oo Arch ah kamaan helin. Waxaan sidoo kale dhaafey deegaanka KDE maxaa yeelay waa wax aad ii soo jiita, haa, laakiin waxtar badan ma leh.
Dhamaadka waxaan doortay Fedora dhamaan kombuyuutarkayga iyo CentOS dhamaan server-yada gaarka loo leeyahay iyo kuwa aan ku haysto shirkada. Fedora waxaan door bidaa deegaanka XFCE iyo adeegeyaashu maheystaan ​​X dabcan: D.
Marka la eego liisanka ceebta Fedora, sida lagu sheegay shirar badan oo ku saabsan shabakadda, waxay ila tahay doqonnimo maaddaama isla liisankaas lagu haysto OpenSUSE ama SLES oo ka mid ah kuwa kale ee badan oo kale. Waa wax macquul ah haddii Red Hat iyo Novel ay yihiin shirkado leh ujeedooyin dhaqaale oo salka ku haya Waqooyiga Ameerika, waa inay raacaan sharciyada firfircoon ee dalkaas iyo in ka badan haddii shuruudahan ay dowladda ku soo rogto dhammaan shirkadaha Mareykanka.
Sikastaba .. Waxaan aad ugu faraxsanahay Fedora / CentOS iyo XFCE si daacad ahna uma maleynayo inay jirto jawi wax soo saar ka badan XFCE: D .. Sidoo kale taageerada Red Hat ayaa muujineysa.
Dhowr su'aalood Elav ..
Maxaad dib u rakibtay? Miyaanay ka fiicnayn in la isticmaalo dawadaro aan u baahnayn in dib loo soo celiyo? Taasi waa sababta aan gacmahayga uga qaaday sii deynta sii-deynta distro's ..
@elav wuxuu leeyahay Workstation oo leh Debian, iyo netbook leh Arch. Wuxuu ubaahan yahay inuu dib uceliyey Arch lakab 8 lakab ah.
Sida saxda ^ _ ^
Aniguna, uma baahnin inaan dib-u-dejiyo Debian-kayga maxaa yeelay waxaan si sax ah u rakibey si aanan dib-u-habeyn ugu sameyn PC-ga (oo aan sanadkiiba mar ku sameeyo Windows-ka).
Hahahaha, si hufan kuwa rogaya ayaa ah kuwa aan u baahnayn dib-u-rakibid si ka duwan wareegga-sii-daynta taariikhda-hayaha, hahahaha.
Hagaag, RHEL / CentOS, waxaan u arkaa inay aad ugu habboon tahay uguna macquulsan tahay inaan isticmaalo CentOS marka loo eego RHEL sababta oo ah qiimaha qiimaha (aragti ahaan waa bilaash, laakiin dhab ahaantii, waxay u muuqataa inay aad uga jaban tahay taageerada Red Hat).
Dhinaca Debian / Ubuntu Server, runtu waxay tahay inaan u janjeero dhanka Debian, maadaama aan khibrado fiican kala soo kulmay Debian marka loo eego Ubuntu Server, gaar ahaan xirmooyinka. Marka la soo koobo, in shirkad culus ay ku siinayso repo xaalad aad u wanaagsan oo lagu beddelayo rukhsad qiimo jaban ayaa sabab ugu filan in aan la dooran Windows Server 2012.
Sida saxda: D ..
Nasiib darro dhibaatooyinka noocaas ah ayaa ah waxa dadka ka fogeeya Linux.
Oo sidaasay u dhaheen KDE waa deegaanka ugu horumarsan dhammaan waana ka sarreeyaa Aqua for Mac iyo Aero ee Windows
Laakiin haddii tani aysan dhibaato ku ahayn KDE laakiin maqalka garaaca wadnaha.
Sidee xiiso u leedahay in Pulseaudio lagu eedeeyo xumaan badan Ru Xeerarka ALSA 🙂
Sidee ku saabsan 'elav', kaliya waan faalleeyaa maxaa yeelay waxaan ogaaday sababta dhabta ah ee dhibaatada.
Xulashada labaad gudaheeda, ogsoonow inaad kula talineyso joojinta rarka moduleka, runti tani wax saameyn ah kuma lahan dhibaatada, waxa run ahaantii xaliya ayaa ah, sidaad xustay, u magacaw faylka "pulseaudio.desktop".
Markii xirmada 'pulseaudio' la rakibo, waxay soo saartaa 2 feylal oo kujira tusaha / etc / xdg / autostart, mid loo yaqaan "pulseaudio.desktop" iyo mida kale "pulseaudio-kde.desktop", haysashada 2dan feylood waxay keeneysaa dib u dhac markii la rakibo desktop-ka. sababay sababtoo ah barnaamijku wuxuu isku dayayaa inuu bilaabo laba jeer.
Sikastaba, marka la badalayo magaca feylka "pulseaudio.desktop", dariiqa ayaa loo daayay si bilaash ah si markaas looga bilaabi karo kaliya faylka "pulseaudio-kde.desktop" sidaa darteedna dib u dhac dambe kuma imaan doono marka aad miiska korontada ku shubaneyso.
Jawaab Marco Martínez
Waad ku mahadsan tahay Marco oo waad ku mahadsan tahay talada. Aniga oo leh KDE 4.8 oo ku yaal Debian Wheezy, waxa igu dhaca dhowr kumbuyuutar ayaa ah in aan dhibaatooyin ku qabay phonon-backend-vlc, waxaan u soo sheegay cayayaanka debian-ka ee sababay in KDE moduleku uu burburo mar kasta oo nidaamka la bilaabay, waa in kujiro nidaamka sixitaanka, markaa hada waxaan ku dhaganyahay codka-gadaal-gstreamer oo ah mid qurxoon.
Dhanka kale, waxaad sheegtey sidoo kale aniga ayey igu dhacaan, in mararka qaar desktop-ka laalaado maxaa yeelay ma dhammeysto rarka astaanta mugga waana inaan dib u billaabaa si aan u awoodo isticmaalka deegaanka.
Waan sameeyay wixii Marcos yidhi, waxaan rajaynayaa inay ii shaqayso hadaanan u baahnayn xalka guud.
Aad baad u mahadsan tihiin, ku farxa dhamaantiin.
Halkan waxaa ku yaal warbixinta bugta ee aan sameeyay, dhammaan kuwa dhibaatooyinka ka qaba qanjirka markasta oo nidaamku bilowdo waxaan kugula talinayaa inaad akhrido. Marka la soo koobo, waa inaad ku rakibtaa phonon-backend-vlc oo ku xulo doorbidyada KDE.
Waan ka xumahay, midka la rakibayaa waa phonon-backend-gstreamer, midka ka socda vlc waa midka sababa in knotify uu guuldareysto. Adkee in tani ay dhici karto ama aysan dhici doonin Debian Wheezy, waxay kuxirantahay kooxda.
Waan ka xumahay in aan waxyeelo u nuglaado laakiin dhamaantiin kuwa ku hadla afka qalafsan ee PulseAudio: MA HELI KARTID FIKRAD AH WAXA AAD KA HADASHO:
1. ALSA waxay u adeegtay waqtigaas laakiin maanta ma xamili karto aaladaha iyo astaamaha dhawaaqa sida PA u shaqeyso, markaa abuuritaanka kan dambe.
2. PulseAudio wuxuu u shaqeeyaa sida LAYER INTERMEDIATE ah oo u dhexeeya ALSA iyo inta kale ee softiweerka ah oo bixiya adduunyo cusub oo fursado u leh nidaamka iyo codsiyada labadaba.
3. Xaqiiqda ah inay wali dhibaatooyin haysato waxaa sabab u ah xaqiiqda ah inay tahay barnaamij aad u yar yar oo muhiim u ah isticmaalkiisa iyo in si firfircoon loogu tijaabiyay qaybinta ilaa noocyadeeda beta ilaa * waa habka kaliya ee * si dhakhso leh horumariyo horumarinta nidaam aad u weyn sida PulseAudio waqti aad u gaaban. Waqtiyada kale soosaarida wax la mid ah PulseAudio oo aad u keento marxalad deggan oo aan wax dhibaato ah laga helin waxay si fudud ku qaadan lahayd 10 ama 15 sano. Sixirka F / LOSS iyo xaqiiqda ah in diro badan ay horey u hirgeliyeen ayaa maanta ka dhigaya inaan ku raaxeysanno nidaam hoosaad maqal oo mustaqbalka ah.
4. Haddii PA ku guuldareysto distoorkaaga markaa qaladku waa ADIGA AMA KAGA YIMAADO, aka lakabka 8. Chakra, tusaale ahaan wuxuu fuliyaa PulseAudio maadaama codsiyo badan ay ubaahan yihiin PA inay ku tiirsanaadaan uruurinta waana mid aad u adag in la helo qof dhibaatooyin leh. Shakhsiyan - faraha ayaa isdhaafay - waligay wax dhibaato ah kuma qabin PA-da Chakra illaa iyo hadda.
5. "module-load module-door-cork" waa mid ka mid ah astaamaha PulseAudio ka dhigaya nidaamka hoose ee mustaqbalka: moduleka ayaa mas'uul ka ah maareynta wabiyada kala duwan ee laga dhageysto barnaamijyada iyo nidaamka isla markaana lagu amro iyadoo loo eegayo sida ay muhiim u yihiin. TUSAALO: waxaan dhagaysanaynaa muusig ama waxaan daawaneynaa filim waxaana nagala soo wacaa Skype ama Hangout: iyadoo casharkaan "door-cork" ah oo la rakibey, PulseAudio kaligiis ayaa mas'uul ka noqon doona hoos u dhigida mugga inta hartay ee maqalka firfircoon yihiin xilligan si aan si raaxo leh ugula hadalno arjiga aan ku helno wicitaanka.
Role-cork ayaa loo habeyn karaa, markeeda, si loo yareeyo mugga barnaamijyada asalka illaa heerka ugu yar (sida cod aad u jilicsan oo xagga dambe ah) ama in la aamusiyo qulqulka codka asalka ah gebi ahaanba.
6. Haddii ay dhibaato kaa haysato PA, badiyaa waa kugu filan tahay inaad tirtirto feylasha ku meel gaarka ah ~ / .cache / event-sound-cache * iyo ~ / .config / pulse / *, dil serverka maqalka oo dib u bilow (Wincrap) - isticmaalayaasha badbaadada si fudud ayey dib ugu bilaabi karaan).
Kahor intaadan qaniinin horumariyeyaasha PA, qaado waqtiga doodaha fikradeed iyo farsamo ee sababta loogu baahan yahay hirgelinta casriga ah ee server maqalka, macluumaadka waa mid guud oo si xorriyad leh loo heli karo iyo macluumaadka kahor intaadan hadlin uma dhigeyso inay u muuqato mid xun sida hadda .
1. Run, laakiin waxaa jira kuwa aan u baahnayn maaraynta sarreysa ee calaamadaha.
2. Lakab kasta oo lagu daro si xawli ah ayuu u kordhiyaa dhibcaha guuldarada, dhamaanteen ma nihin kuwo diyaar u ah inaan sidaa sameyno si aan u helno xulashooyin cusub.
3. Waxaan u maleynayaa inay wax weyn tahay in qeybinta ay tijaabiso tiknoolajiyada cusub si loo horumariyo, laakiin adeegsadaha aan tijaabiyaha aheyn, oo aan waligiis soo diri doonin hal warbixin ayaa laga yaabaa inuu doorto inuusan adeegsan.
4. Waxaad ilowday inay ka hooseeyaan lakabyo badan, qalabka kombiyuutarradu waa mid ka mid ah, isku mid ma aha inaad kor u qaadatid kaarka maqalka oo aad wadato darawal guud oo ah 5 dlls. mid ka mid ah Xonar, oo leh kaliya ALSA oo u shaqeeya si ku-meel-gaadh ah, laakiin markii aad gasho codka saxaafadda, adeegsadaha aan horumarsanayn ayaa ku tuuraya kiiboodhka sagxadda dhulka markii uu ogaado in faylasha la beddelayo si loo muujiyo kaarka noqonaya la isticmaalay, imisa kanaal, heerarka kanaal kasta iyo xitaa heerka saamiga.
5. Shakhsiyan, ikhtiyaarrada noocan ah waxay ila muuqdaan wax lagu qoslo, laakiin haye, kumbuyuutarradeyda waxa kaliya ee ka dhawaajiyaa waa muusig iyo fiidiyowyo, dhammaan codsiyada (oo ay ku jiraan ogeysiisyada iyo codadka nidaamka) waa la aamusan yahay ama laxaad la 'yahay, wax kasta oo kale waxaan haystaa taleefanka .
6. Si fudud laakiin aan loo baahnayn haddii aadan isticmaalin PA.
Waxaa jira noocyo badan oo adeegsadayaal ah, kuwa ugu aasaasiga ah, kuwaas oo fiiriya fiidiyowyada YouTube-ka, dhageysta mp3s-ka oo ah 96 kbps iyo marka ay rabaan inay sameecaduhu dhawaaqaan, waxay soo jiidaan fiilada dhagaha la gashado si ay ugala baxaan, Xirfadlayaashu, kuwa sameeya oo dib u fura. tafatirka feylasha badan ee tayada leh. Dadka jecel tikniyoolajiyadda cusub, ee kumanaan qalab ku xira kombiyuutarka oo jecel inay ka hadlaan cutubka ugu dambeeya ee Game of Thrones oo ay la socdaan 16 saaxiibo isku mar ah Skype-Hangouts-Facebook… ama lamid ah.
Si aad u dhadhamiso midabada.
Waxyar ayaan ka jeclahay falsafada KISS, oo leh ALSA + Phonon VLC (Si loo yareeyo tayada faylasha leh ugu yar ee barnaamijyada) iyo Kmix si loo jaangooyo heerarka, waxaan ku guuleystaa aasaaska dhib la'aan.
Kuwa horumarsan, dhawaaqa wuxuu ka soo baxayaa optics ama USB ilaa DAC oo waxaan u ogolaanayaa xirfadlayaasha codka inay la tacaalaan.
Ma jiro lakabyo dhexe oo aan loo baahnayn.
Gmrun: qalab furan oo aad u fudud
Hal bil ah Manjaro Linux